--shots: Ithuluzi elithakazelisayo lokuthwebula isikrini | Kusuka kuLinux
Sonke sinesidingo Sokubamba isikrini se-distro yethu, kunamathuluzi ahlukahlukene avumela ukuba senze lo msebenzi, mhlawumbe owaziwa kakhulu I-GNU / Linux es Isivalo, kepha namhlanje ngihlangane nenye indlela ethokozisayo ebizwa -Izinhlamvu.
Mhlawumbe yini okuthakazelisa kakhulu mayelana -Izibhamu ukuthi kwenziwa ngokusebenzisa I-HTML / CSS / JS futhi yakhiwe nge I-Electron kokunye, ukusebenza kwayo kufaka phakathi lokho okudingekayo ukuze kusetshenziswe nsuku zonke.
1 Kuyini -shots?
1.1 Ubuchwepheshe obusetshenziswa ngama-shots
2 Ungayifaka kanjani i-shots
3 Ungazigcina kanjani izithombe-skrini kuseva yethu?
-Izinhlamvu Inesihleli esihle kakhulu sesithombe-skrini esivumela ukuthi sengeze: Imicibisholo, Imivimbo, Imigqa Eqondile, i-Emoji, Fiphalisa isithombe, Imibhalo, njll.
Singabona ukusetshenziswa nezici ze- - shots, ezivela kule vidiyo eyenziwe onjiniyela bethuluzi.
Ubuchwepheshe obusetshenziswa ngama-shots
Enye yezinto ezithakazelisa kakhulu zaleli thuluzi ubuchwepheshe obusetshenzisiwe, obhalwe ngezansi:
Ungayifaka kanjani i-shots
Ungalanda iphakheji elihambisana nokusabalalisa okuthandayo noma uhlelo lapha, bese uyifaka nje usebenzisa umphathi wephakheji ezenzakalelayo.
Ukufinyelela ithuluzi, sebenzisa imenyu yomhlaba, imenyu yokuqukethwe (chofoza kwesokudla), noma izinqamuleli.
Ungayifaka futhi uyisebenzise ngokusebenzisa ikhonsoli, usebenzisa imiyalo elandelayo:
git clone https://github.com/binjospookie/--shots.git npm ukufaka npm run && npm qala
Ungazigcina kanjani izithombe-skrini kuseva yethu?
Isici esisodwa okufanele sigqanyiswe mayelana nama-shots, ukuthi asivumeli ukuthathwa kwesikrini ukuthi kusingathwe kuseva yethu, ngoba lokhu kufanele silandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Faka ifayela functions.php y savePhoto.php kwiseva yakho.
Qalisa uhlelo lokusebenza.
Vula 'Izilungiselelo' bese uchofoza ku 'Shintsha indlela yeseva'
Bhala indlela bese uqhafaza ku-'Save '.
Ukuphetha, singasho ukuthi iyithuluzi elikwazi ukuvivinywa, elinokusebenza okuyisisekelo kepha liyasabeka futhi lisinikeza ithuba elihle kakhulu lokuhlela nokusingatha lokho esikuthumbile, ngokushesha futhi kalula.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » -Shots: Ithuluzi elithakazelisayo lokuthwebula isikrini
Uhlelo oluhle kakhulu, ngiyabonga ngethiphu.
Lokhu kuphuma esandleni ... okuthile ku-Electron ukuthatha izithombe-skrini? Angisho ukuthi kubi, futhi empeleni ukukwazi ukuhlela okuthathwe kanjena kubonakala kungumqondo omuhle kakhulu kimi, kepha kubulala izimpukane ngezibhamu, into esayenza eminyakeni eyi-10 eyedlule kepha manje isebenzisa i-CPU eningi nokunye okuningi inkumbulo
Uma kungaba enye yezinkinga leli thuluzi elibhekene nazo, manje, ukuhlolwa kokusebenza engikwenzile, kungithatha izinsiza ezincane kakhulu ukukhuluma iqiniso.
Ngisebenzisa i-gnome-skrini futhi kuhle, angiboni ukuthi yini engcono ngalesi sibhamu okufanele siyisebenzise. Kungakuhle uma kube nokuqhathaniswa nabanye okufana nale engikusebenzisayo, ukwazi ubuhle nobubi bayo, uma kungenjalo, kufana kakhulu noma kubi kakhulu.